Omunye izimoto edume kunazo Chinese angabhekwa Lifan X60. Imininingwane umshini kwadala impikiswano enkulu khona phakathi kwabantu abahluphekayo ochwepheshe yangempela kukhethwa imoto enhle. Ngakho kungase kubhekwe a izimoto ezinhle Chinese? Kuyini lokhu oyisibonelo?
Ngaphambi kokuba sixoxe ngalokho has Lifan X60 Ukucaciswa, kuyafaneleka ukunakwa amanye amaqiniso athakazelisayo. Ngakho, okokuqala, lo mshini usuthandwa China ingxenye enkulu ngenxa yokuthi ngokuthi yayinesimo amanani aphansi kakhulu. Esikhathini isimo esisha imoto izobiza ruble ezingaba yingxenye yesigidi. EChina, izindleko lokhu ngempela kubhekwa encane. Yebo, futhi abaningi izakhamuzi zethu nabo akuyona imali, uma kuziwa imoto. Namanje captivates ukubukeka eziningi ezimnandi futhi ingaphakathi. Ngokuvamile, ukuba qotho - lena umshini kubashayeli ngikhetha abamane kudingeka imoto ukushayela azungeze umuzi kanye Nedalniy uhambo. Abantu abathenga le imodeli ngalezi zinjongo, bayajabula futhi ushiye okubuyayo kuphela. Ekhululekile, ethokomele, nice - yilokho indlela ukhulume imoto yabo.
Ngokuthakazelisayo, Lifan X60, izici kabani lobuchwepheshe Kamuva sizoxoxa ngokuthi, kubhekwa ethandwa kakhulu compact SUV Chinese ukukhiqizwa. Futhi izizathu ezamenza edume ngakho, ziye okuxoxwe ngawo ngenhla. Khona-ke kufanele ukhulume ngawo kabanzi.
umkhiqizi Chinese ngonyaka odlule eshicilelwe eziningi imikhiqizo emisha. Nakuba iningi labo, yebo, washiya e ezweni lendabuko. Kodwa futhi iphuma emshinini emgqeni futhi olusha Lifan X60. Imininingwane zingcono, ngaphandle Ochwepheshe baye bathuthukisa chassis. Umklamo akazange icindezelwa. Onjiniyela kuphela ukulalela abakushoyo mayelana nomsebenzi wabo zezimoto art abashayeli. Ngenxa yalokhu ushintsho imoto Lifan X60 Ukucaciswa. Izibuyekezo baqinisekiswa ukuthi kwakuzoba ngcono wonke-wheel drive version, ngoba phambi kuzokuhlupha kakhulu, ikhumbula ukuthi hlobo luni imoto embuzweni. Awu, abakhiqizi sebenamashumi eminye imisebenzi yokuthuthukisa imodeli.
Ngakho, yini babé entsha imoto Lifan X60 Ukucaciswa? Shayela Yiqiniso, kwaba ephelele. Wanezela ezine-wheel drive uhlelo okwesikhathi 4WD ekhethekile. Lapho ke ungakhetha ngisho imodi yokuhamba. Futhi-ke, kwakukhona nezinye izibuyekezo ezithakazelisayo, isibonelo, washintsha umklamo ukumiswa. Onjiniyela ke kakhulu kabusha ngokuhambisana izidingo zanamuhla futhi lonke zobuchwepheshe ushintsho izimoto. Futhi endlwaneni eyakhiwe kungabonwa okwengeziwe ukulungiswa Washer-wheel drive mode. Ngenxa yakho konke lokhu umuzwa uhambo kuzohluka ngempela. Kuze kube manje, akekho ugijima ingozi ukubheja bememezana lokhu imoto umholi bezikhali emakethe imoto Chinese. Kodwa, ngokusho izibikezelo, futhi uphethe imodeli luthemba kuzoba kanjalo.
Le moto ubukeka kahle, isiko best of the ukukhathazeka umenzi, ungase uthi. By endleleni, lapho sithi nhla le moto, kunomuzwa wokuthi umklamo isivele wahlangana endaweni ethile. Futhi ngempela. Kukhona yini ukufana okuphawulekayo endleleni Flagship Japanese isizukulwane wesi-2 RAV4. Kodwa ngaphandle ibuye kuyofikwa nemigqa yesimanje eziye ngokucophelela elicwengisiswe Abaklami Chinese.
Nokho, abaningi ukufana okunjalo ne-Japanese udumo akajabuli, ngoba wonke umuntu elinde ukuzimela kusukela ukukhathazeka Chinese. Noma kunjalo, ukuklanywa umshini waphenduka ayizidlakela: imiphetho ebukhali, etholakala kulo lonke umzimba, umbono omuhle sephrofayela hood, kokuvula ngokuqondile gumbi, eliphezulu phambi yokukhanya, Izinsimbi, we-chrome kuhlinzwa, logo yenkampani (futhi chromed), iphrofayela ezinhle, futhi ekugcineni, ngokwanele ehlotshisiwe ingaphakathi.
Ukukhuluma imoto Lifan X60, Ukucaciswa, wonke-wheel drive nengaphandle lazo mthandazo oyisibonelo, asikwazi bayakhohlwa elingaphakathi yayo. Ngahlobisa ke ngempela ezithakazelisayo, kodwa hhayi yokuqala. Nalapha futhi, kukhona usukela ukufana ne RAV4. Yokweba a baxgeki futhi abashayeli aluvunyiwe, kodwa lokho akuzange bheka sibi ukwedlula salon. Ergonomics, sibonga ukusetshenziswa enqubeni ukukhiqizwa ubuchwepheshe Japanese, washintsha futhi uyoba mkhulu. Kusukela manje, i-crossover Chinese ngisho a baxgeki ngikhetha kungenzeka waqonda njengoba umshini kunokuba into ingafaneleki.
Ukushayela ukusebenza, amandla kanye electronics
mhlawumbe Lena ingxenye ebaluleke kakhulu yokuxoxa imoto Lifan X60. Ukucaciswa kobuchwepheshe, petrol, amandla enjini, phansi imvume - konke ngokumangalisayo ezinhle: 4 cylinder 1.8-litre engine nge 128 amahhashi, emihlanu-step Mechanics, ngisho ukumiswa design akhethekile. On the front oluvala amasondo multi-isixhumanisi, nengxenye yalo engemuva is a unique, trehrychazhnaya. Plus, amaShayina baye bazama the yokubeka, kwenze kangangokuthi manje akunandlela yokugqashula. By the way, eRussia benza ukushaqeka wezinciphisi namandla ngokukhethekile. Ngokuvamile, ukwanda permeability kungenzeka, futhi ukukhathalela "Lifan" etholwe abagxeki abaningi futhi abashayeli udumo. Fuel ukusetshenziswa, ngasendleleni, kuncane kakhulu: ngu-8 amalitha ngamunye amakhilomitha 100 - kahle ukonga.
I-Chrome, izibani inkungu, isondo Ukugunda ayo, lesikhumba ingaphakathi, kungenzeka ukulungiswa lezihlalo, air conditioning, sunroof, enhle amasondo ingxubevange, yokupaka izinzwa - umshini ifakwe konke okudingekile. Awu, ngempela kukho okuhle isabelomali, okungenani e China, sesiye ethandwa.
Isixazululo for kuvuleke tile: inani plasticizer
Ingabe Spot on the Sun kuthinte okuvela izindawo esikhunjeni esikhumbeni
Carders - ngubani? Indlela ukuntshontsha imali amakhadi epulasitiki
UMesiya esemncane: izinyathelo zokuqala zenkanyezi esizayo